प्रगतिशील समूहबाट महासचिवका उम्मेदवारको निरन्तर अवरोधपछि चिकित्सक संघको मतगणना अनिश्चित कालका लागि स्थगित – Health Post Nepal
२०७६ माघ २२ गते २२:३४
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)को नयाँ कार्यकारिणी समितिका लागि निर्वाचन सकिएको २४ घण्टाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि सुरु नै नभई स्थगित भएको छ । महासचिवका चार मध्ये एक जना उमेदवार डा. मधुर बस्नेतले एकपछि अर्को अस्वाभाविक माग तेर्स्याएर समग्र मतगणनालाई अगाडि बढ्न दिइरहेका छैन् । उनी सत्तापक्षीय प्यानलका उमेदवार हुन् । बुधबार विहान ८ बजेदेखि नै एकपछि अर्को माग राख्दै मतगणनालाई रोक्दै आएका डा. मधुर बस्नेतले साँझ सहमतिपछि मत गणना सुरु गर्ने भनेपछि मतपेटिका खोलेपछि भने नयाँ नयाँ माग अगाडी सारेका थिए ।
योसँगै निर्वाचन समिति खोलिसकेको मतपत्र पुनः लाहछाप लगाएर मतपेटिकामा खन्याएर मतगणना स्थगित गरिएको छ । पछिल्लोपटक उनले जिल्लाबाहिर र काठमाडौँका सम्पूर्ण मतदाताको सूची हेर्न पाउँनुपर्ने माग राखेका छन् । साँझ बस्नेतले आफ्नै फेसबुकमार्फत् पनि चारर बुँदे फरक मतसहित मतगणना सूचारु गर्न सहमत भएको उल्लेख गरेका थिए । सोअनुसार प्रगतीशील समूहको पकड रहेको मानिएको सुरुमा लुम्बिनी, दाङ, जुम्ला र सूर्खेत शाखाका मतगणना सुरु गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर मतपत्रसमेत मिलाएर गणना थाल्नै लाग्दा उनी फेरी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । मतगणनास्थलमा उपस्थित चिकित्सकहरु बस्नेतलको ढिंपी अस्वाभाविकमा बढ्दै गएको भन्दै शंसकीत भएका छन् । विशेषगरी नेकपाभित्र पनि पूर्व माओवादी खेमाबाट महासचिवमा उमेदवार बनेका बस्नेतमाथि अन्तघातको आशंका गरिएको छ । प्रगतीशील प्यानलको भोट स्वतन्त्र भनिएका नेकापा निकटकै उमेदवार डा.दिपेन्द्र पाण्डेले पाएको अनुमान धेरैको छ । यस्तो अवस्थामा बस्नेतको एक्लो ढिंपी अस्वाभाविक भएको प्रगतीशील समूहकै चिकित्सकसमेत आश्चर्यमा परेका छन् ।
उनको यो ढिंपीको आडमा निर्वाचनमा सत्ताको हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजिएको त हैन् भन्ने आशंका पैदा भएको लोकतान्त्रिक प्यानलका चिकित्सकहरुको आशंका छ । दिनभर डा. बस्नेतसहित प्रगतीशील समूहका केही चिकित्सकले गणना गरिएका प्रत्येक भोट प्रोजेक्टरमा देखाउँनुपर्ने, मतगणना एकै ठाउँबाट हुनुपर्ने जस्तामा माग राखेर मतगणना रोकेका थिए ।